Faha-10 taonan’ny mpitsara kitra ao Ambohidratrimo Nomarihana tamin’ny fomba nanetriketrika
Nankalazaina tamin’ny fomba nanetriketrika teny amin’ny tranompokonolona DADABENA teny Ambohidratrimo tamin’ny
01novambra 2019 lasa teo ny faha 10 taona nisian’ny mpitsara baolina kitra teny Ambohidratrimo sy ireo mpikambana rehetra manerana ny kaominina, ato amin’ny distrika.
Maro ireo mpitsara lalao eny amin’ny fokontany no tonga nankalaza izany teny an-toerana izay natrehan’ireo olo-manan-kaja isakin’ny kaominina, izay samy tonga nandray fitenenana amin’ny maha zava-dehibe ny fitsarana kitra eny amin’ny fokontany.
Miisa valo ireo kaominina misy ireo mpikambana mpitsara baolina kitra, dia 3A Anosiala misy mpikambana 27 mianadahy, AFA Ambohidratrimo 32, APA Ambohitrimanjaka 19, AZ 4 Merimandroso 22, CAFIA IVATO 42, DRA Ambohidratrimo 24, efa misy amin’ireo mpitsara kitra ireo no efa mitsara lalao lehibe any amin’ny faritra hafa any fa manao ny fiomanana ny hitsara lalao iraisam-pirenena any ivelany. Koa miantso fanohanana amin’ireo olom-boafidy eny an-toerana mba hanatsarana bebe kokoa ny fandrosoan’ny fikambanana ho lasa alavitra araka izay tratra. Fiaraha-misakafo mazava loatra no namaranana ny lanonana teny Ambohidratrimo.